Olana amin'ny akne? Sakafo tokony hialana | Bezzia
Tony Torres | 11/05/2022 20:00 | Torohevitra momba ny fahasalamana, sakafo
Raha manana olana amin'ny akne ianao dia tokony manalavitra ny fihinanana sakafo sasany izay manimba ny hoditra amin'ireo tranga ireo. Amin'ny ankapobeny, ireo sakafo rehetra misy matavy be loatra sy sakafo nendasina. Fa ny lisitra dia afaka manampy sakafo izay toa tsy mampidi-doza, fa fahavalo lehibe ny hoditra mijaly amin`ny akne. Ny sakafo ara-pahasalamana, izay ahitana sakafo miaro ny hoditra ary manilika ireo izay manimba azy, dia iray amin'ireo fitaovana lehibe amin'ny ady amin'ny akne.
Na izany aza, ny olana amin'ny hoditra matetika dia vokatry ny anton-javatra isan-karazany, izay ilaina ny mangataka ny fanampian'ny matihanina ara-pahasalamana. Noho izany, ankoatra ny fanatsarana ny sakafo hikarakarana ny fahasalaman’ny hoditra dia tokony hanatona mpitsabo aretin-tsaina ianao mba hahafahany mamakafaka tsara ny olanao. Soa ihany ho hitanao ny fitsaboana tsara indrindra amin'ny olanao ny akne.
1 Inona no sakafo tokony hialana amin'ny ady amin'ny akne
1.2 kitapo sakafo
1.3 sakafo be matavy
1.4 zava-mamy voavoatra
1.5 Ireo pizza
Inona no sakafo tokony hialana amin'ny ady amin'ny akne
Alohan'ny hanesorana ny sakafo amin'ny sakafo dia tena ilaina ny manatona dokotera mba hisorohana ny tsy fahampian-tsakafo. Ny famerana rehetra tsy misy fanaraha-maso ara-pitsaboana dia mety hampidi-doza ho an'ny fahasalamana, noho izany dia tena ilaina izany fanaraha-maso mba hanamarinana fa mivoatra ara-dalàna ny zava-drehetra. Raha omen'ny dokotera anao ny lalana dia azonao atao ny manafoana ny sakafo sasany izay mampitombo ny akne.
Ny sakafo nendasina dia iray amin'ireo fahavalo ratsy indrindra amin'ny akne, satria ilaina ny menaka be dia be sy ny mari-pana ambony indrindra hanamboarana sakafo toy izany. Mivondrona ao anaty sakafo io tavy io, mamadika azy ho baomba matavy izany no mampitombo kilao ary ho an'ireo manana olana amin'ny hoditra, olana lehibe izay hiharatsy kokoa. Mifidiana fomba fahandro hafa maivana kokoa, makà fryer an'habakabaka ary mihinana menaka oliva virjiny manta. Noho izany dia azonao atao ny manararaotra ny tombontsoa rehetra amin'ity sakafo mahasalama ity.
Ny tsakitsaky rehetra voahodina dia misy tavy tototry mampidi-doza ho an'ny fahasalamana amin'ny lafiny maro, anisan'izany ny toetry ny hoditra. Na poti, tapa-kazo na na inona na inona amin'ny endrika snack bag, mitovy ny vokany. Noho izany antony izany dia tokony hesorina amin'ny sakafonao izy ireo raha mihinana azy tsy tapaka ianao, satria hihatsara ny hoditrao amin'ny fiovana.
sakafo be matavy
Ireo sakafo rehetra misy tavy be dia be dia tsy soso-kevitra raha te hifehy mony ianao. Anisan'izany ny ny chorizo ​​​​amin'ny dikan-teny rehetra, ny bacon, ny dibera na karazana hena be tavy. Ny tsara indrindra dia ny misafidy legioma, voankazo, proteinina matavy ary legume, izay hanome ny sakafo ilainao ary ho afaka hiady ianao. olan'ny hoditra.
Ny mofomamy indostrialy dia tsy tokony ho anisan'ny sakafonao koa raha mila mifehy ny akne ianao. Ireo karazana vokatra ireo dia misy ampahany betsaka tavy tototry sy akora manimba ny fahasalamana. Noho izany, raha tsy te handao ny mamy tsindraindray, dia tsara indrindra ny manomana azy ao an-trano miaraka amin`ny akora voajanahary.
Indrindra fa ny pizza vita amin'ny ultra-processed na ireo avy amin'ny trano fisakafoanana haingana. Ity vokatra ity dia misy tavy be dia be amin`ny maro amin`ireo akora izay nomanina, ka lasa baomba matavy manontolo tsy mifanaraka amin`ny fikarakarana mony. Raha te hihinana pizza tsindraindray ianao, dia tsara kokoa ny manomana azy ao an-trano amin'ny fomba ara-javakanto, mifidy ny akora mahasalama indrindra.
Raha fintinina, ny sakafo tokony hofoanana amin'ny sakafonao mba hifehezana ny mony dia ireo izay misy tavy be dia be ary raha fintinina dia mampidi-doza ho an'ny fahasalamanao amin'ny lafiny rehetra. Ireo vokatra ireo dia manampy kilao fanampiny, tsentsina ny lalan-dra ary miteraka olana amin’ny hoditra toy ny akne. Noho izany, ny fanesorana azy ireo amin'ny sakafo dia tsy hanampy anao hanatsara ny akne, fa hanatsara ny fahasalamanao amin'ny ankapobeny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Torohevitra momba ny fahasalamana » Olana amin'ny akne? Sakafo tokony hialana
Ahoana no ahafantarana raha namanao akaiky koa ny namanao
Summer Sounds, fanangonana festival Springfield